Puntland oo soo saartay go’aan lagu mamnuucayo jarista dhirta – Banaadir Times
Puntland oo soo saartay go’aan lagu mamnuucayo jarista dhirta
By banaadir 20th April 2021 63 No comment
Maamulka Puntland ayaa sheegay in degaannadooda uu aad ugu xoogestay jarida dhirta laga sameeynaayo dhuxusha, isla markaana ay dhibaato ku tahay degaanka oo uu xaaluf ba’an kajiro.
Kusimaha Wasiirka Wasaarada Deegaanka Beeraha Iyo Isbadalka Cimilada Puntland ahna wasiiru dowlaha Wasaaradda Cabdirashiid Cali Geelle ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay degaano badan laga jarayay Geedaha si dhuxul looga sameeyo halka degaano kale ay Puntland ku guuleysatay inay ka joojiso.
Waxaa uu hadalkiisa uu intasi ku daray in untland ay mamnuucday jarista dhirta si dhuxul looga sameeyo, ciddii lagu arkaana tallaabo sharci ah laga qaadi doono sidoo kalena dhawaan ay soo saari doonaan Go’aano ku saabsan ka hortagga jarista dhirta laga shido dhuxusha.
Ugu dambeyn Wasiirka waxaa uu sheegay in hadii aan la joojin jarsta dhirta degaannada Puntland dhulkooda uu noqonayo mid la xaalufiyaym taasina aysan u dul qaadan doonin Wasaarada Deegaanka Beeraha Iyo Isbadalka Cimilada Puntland .
Dhowr jeer ayaa Maamulka Puntland waxaa uu soo saaray go’ano lagu mamnuucayo jarista dhirta dhuxusha aga shido, hayeeshee Go’aanadaas aysan noqon kuwo dhaqan gala oo weli si caadi ah dadka ay dhirta u jarayaan.
DFS oo sheegtay in uusan waxba iska bedelin Go’aankii Golaha Shacabka
Wasiirka Wasaaradda Tamarta oo kulamo muhiim ah la yeelatay madax ka socotay IOM iyo IGAD
By banaadir 16th July 2019
By banaadir 30th May 2018
Puntland oo amartay in Misaajida laxiro.